Gisella - Tapitra ny fotoana! - Countdown ho an'ny Fanjakana
Jesosy Tomponay mba	Gisella Cardia	amin'ny 26 septambra 2020:
Nahazo tamim-pahasambarana nandritra ny fitenenana ny rosary masina.
Ry rahalahiko sy rahavaviko, misaotra noho ny vavakareo, faly aho mahita anao eto amin'ity trano voatahy ity. Anaka, oh, firy tsy firaharahiana [misy]! Nasehonao ny tsara ho ratsy ary ny ratsy ho tsara. Mijery ny zava-mitranga ianao, fa amin'ny tsy firaharahianao, nefa dia tapitra ny fotoana. Anaka, sokafy amiko ny fonao, satria Amiko ihany no ahazoanao famonjena. Aza matahotra Ahy, aza matahotra ireo hafatra ireo: tsy misy mahavonjy anao afa-tsy Izaho. Tsy avelako ny zanako hiankohoka amin'Andriamani-kafa fa tsy Izaho; Miezaka amin'ny fomba rehetra i Satana mba haka ny fanahin'ireo zazakeliko, ny zanako lahy sy vavy, ny zanako. Ah! fanalan-jaza, euthanasia - avy amin'ny ratsy daholo, nefa milamina ianao, toy ny hoe tokony hiverina amin'ny fomba taloha ny zava-drehetra. Matokia, anaka, fa tsy hisy hiverina any amin'ny nisy azy taloha; tsy ho ela dia ho hitanao fa miova izao tontolo izao. Tapitra ny zava-drehetra, nefa mbola tsy azonao ihany. Maninona ianao no tsy mihaino ny reniko, izay mbola manome anao fahasoavana manakaiky anao? Endrey, mahafinaritra ahy tokoa ny fiaraha-mivavaka ataonao: ho eo aminao foana aho, fa omeo ahy ity fifaliana ity isaky ny sabotsy: * Fotoana fivoriana mahazatra ho an'ny vondrom-bavaka ao Trevignano Romano. tranon'ny Raiko ity, voatahy ahy, natokako. Anaka, tiako ianao mihoatra ny zavatra hafa rehetra, maty ho anao sy ny fahotanao aho. Aza avela irery aho: tiako ho voavonjy ianao. Ny zavatra rehetra hitranga dia asan'ny Raiko. Ankehitriny hitany fa tsy misy olona mitodika any amiko ary mitodika any amin'ny Ray izy mba hanampy azy; Ny Tompontsika dia mampiasa hyperbole tahaka ny nataony tamin'ny Evanjely: "Rehefa tonga ny Zanak'olona, ​​hahita finoana ety ambonin'ny tany va Izy?" (Lioka 18: 8) angamba tonga ny fotoana hanaovana an'izany? Jereo izay hitranga tsy ho ela - tena, tsy ho ela. Mitso-drano anao aho; anaka, handalo tsirairay eo afovoako hanome anao ny fitiavako rehetra; sokafy Amiko ny fonao dia homeko anao ny fahasoavana, ny fitiavana, ny fifaliana ary ny fanantenana tontolo vaovao. Jereo: Ny marain'ny fanantenana
↑1 * Fotoana fivoriana mahazatra ho an'ny vondrom-bavaka ao Trevignano Romano.
↑2 Ny Tompontsika dia mampiasa hyperbole tahaka ny nataony tamin'ny Evanjely: "Rehefa tonga ny Zanak'olona, ​​hahita finoana ety ambonin'ny tany va Izy?" (Lioka 18: 8)
↑3 Jereo: Ny marain'ny fanantenana
Posted in Gisella Cardia, Messages, Ny fanaintainan'ny asa.
← Fr. Novakian'i Michel Rodrigue ny…
Jennifer - Tsy fotoana intsony →